Cali Mire ?xannuun dadku sanka dhiig ka keennayaan baa 50 qof ku soo ritay Tooxin? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 23, 2013 3:35 b 0
Bareeda, November 23, 2013 – Tuulada tooxin ee hostagta degmada Bareeda ee gobolka Guardafu ee Puntland, waxaa ka dilaacay xanuun halis ah oo soo ritay in ka badan 50 ruux oo dadka tuulada ah, sida ay sheegeen maamulka Puntland.
Gudoomiyaha gobolka Guardafu Cali Mire xuseen oo gaaray tuulada Tooxin isla markaasna la hadlay radio Daljir, waxaa uu sheegay in xanuunku yahay mid aan la garannayn balse dadku ay dhiig ka keenayaan sanka.
?dadka madaxa ayaa laga qabannayaa kadibna sanka ayuu qofku dhiig ka keennayaa, dad badan buu xanuunku ku soo ritay tuulada iyo deeganada ku harreeraysan.? Ayuu yiri Gudoomiye Cali Mire
Xannuunka ayaa ka dilaaca deegaanka mar kasta oo roobab ay da?aan, ma jirto cid ilaa hadda u dhimatay, balse gudoomiyaha Guardafu waxaa uu sheegay in ay arrintan u aanaynayaan maraakiib Kiimiko wadda oo deegaanka ku aasan tan iyo sanadkii 1930-kii.
Roobabkii duufaanta iyo dabaylaha watay ee deegaanka ka da?ay ayuu sheegay guduumiyuhu ay sababeen dhimashada 14 ruux, xoolo fara badan ayaa roobabka lagu waayey, sidoo kale kalluumaysata ayaa khasaare xoog leh soo gaaray, marka loo eego deeganada Guardafu.
Dhegeyso: Khadra degan oo daljir ka tirsan ayaa waraysatay gudoomiye Cali mire oo tooxin jooga